အထူးအစီစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » အထူးအစီစဉ်
Posted by water-melon on Mar 28, 2012 in Travel | 56 comments
အလှူကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ကောင်းတာတွေရော မကောင်းတာတွေရော ကြားနေရလို့
ကျွန်တော်တို့ မန်းလေးက Mandalaygazette members တွေစုပေါင်းပြီး အောက်ပါအစီအစဉ်ကို
( ၁ ) ပန်းတနော်သို့ လိုက်ပါမည့် အလှူရှင်များအား မန်းလေးမှရန်ကုန်သို့ သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်
Express Car အားစီးလုံးငှားပြီး ကူညီပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း ( ကားခမှာ free ဖြစ်ပါကြောင်း )
( ၂ ) ၁ သိန်းနှင့်အထက် ကုသိုလ်ရှင်များအား ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးခြင်း
ပထမဆု- 32 လက်မ LG Plasma TV
ဒုတိယဆု- LG Home Theater ( HT964T2-AM )
တတိယဆု- LG ရေခဲသေတ္တာ ( GR-P227ZDB )
နှစ်သိမ့်ဆု ( ၃ )ဆု- LG အဝတ်လျှော်စက် Inverter Direct Drive
( ၃ ) ငါးသောင်း နှင့်အထက် ကုသိုလ်ရှင်များအား သာယာလှပ ချမ်းမြေ့သော
( ၄ ) ၁ သောင်း ကုသိုလ်ရှင်များအား ရန်ကုန် မန်းလေး အသွားအပြန် စားစရိတ် free ဖြစ်ကြောင်း
မှတ်ချက်။ ။ ဤအစီအစဉ်သည် မန်းလေးမြို့မှ မန်းသူမန်းသားအတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ လိုက်ပါလိုသူများ ကုသိုလ်ရှင်တွေအနေနဲ့ မန်းလေးသူမန်းလေးသားစစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရန် အိမ်ထောင်စုဇယားယူခဲ့ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း။
View all posts by water-melon →
တားတား မန်းလေးသား စစ်စစ်ကြီးပါ.. အခု ရန်ကုန်က နေ မန်းလေးကို သင်္ကြန်ကားခ မရှိလို. တိုတို ဖြဲတီး ကားခ စိုက်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ…….
အပြန်ကျတော့ အလှူငွေထည့်ရင်း ရန်ကုန်သို. free အစီအစဉ်ဖြင့် လိုက်ပါမည် ဟိဟိဟိ…
မန်းလေးသား စစ်သလားတော့ မမေးနဲ.. ဆိတ်ကြည့် အားခနဲ. အော်ဒယ်……….
မန်းလေးသားစစ်ကြောင်း ဘယ်နေရာကို ဆိတ်ရမှာလဲဟင်
မန်းလေးသားတွေက သဘောကောင်းပြီး ချောပါတယ်ချင့်
ဂန်ထရီ ဥူးဦးထုပ် says:
မန်းသူလေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင် ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ရက် ရှေ့တိုးလုပ်မှ ရတော့မယ်
မီးနဲ.လားဟင် တိုတိုမတ်ချိ ခိခိခိ
ကိုမတ်က ညည်းလိုဂျပုမတွေကို မကြိုက်ဘူးဟဲ့
အရည်ရွှမ်းတယ်လို့ ကြားဖူးတယ် …
ဟုတ်လားဟင် မမဖရဲ ….
အင်း ရွှမ်းချက်ကတော့ ဗြန်းဗြန်းမြည်နေတာဘဲ
စားကြည့်လေ ပြီးမှ ကြိုက်မကြိ်ုက်ပြောပေါ့
အဲလောက် သဘောကောင်းပုံထောက်ရင် ..
ဖရဲက အတော့ကို ချောမှာ ကျိန်းသေတယ် …
ဖရဲသီး ချွင်းချက်အနေနဲ့ နင့်အစီအစဉ်ထဲ နာ့ကို ထည့်ထားလိုက်နော် …
အင်း ဖရဲကတော့ လုပ်လိုက်ပြန်ပြီ
မန်းလေးက ဆရာတွေ မန်းလေဂဇက်မှာ အများကြီးပါ
ပြည်.စုံ (ကြေးသွန်း) says:
ကျွန်တော်တို.လို မန်းသူလေးနဲ. အိမ်ထောင်ကျ သူတွေရော လိုက်လို.ရမလားဗျ
မန်းလေးသူလေးရဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယားထဲ ထည့်လိုက်ရင် ရပါတယ်
သတ်မှတ်ထားသော အလှူငွေ မထည့်သူများကိုတော့ လမ်းခရီးတွင် ဘဲဥနဲ့ဖရဲသီး အကျွေးအမွေးဖြင် ့ဧည့်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်း…။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီးဒုတ်ရေတံခွန်လိုက်လိုသူများ ကျန်းမာရေးအာမခံချက်ပါရမည်..။
ဖရဲမ ကိုပေါက်ခေါ်ရာနောက် ဒီးဒုတ်အရောက်မှာ ဖိနပ်တောင် မပါနိုင်တော့ပဲ လူဆို အမောဆိုက်နေလို့ မနဲ နှာနပ်ယူရတယ်လေ။
အဲဒီနောက်တော့ ကိုပေါက် ဒီးဒုတ်ဂူထဲသွား၊ရင် လိုက်အုံးမယ် ချည်းလုပ်နေလေရဲ့။
သူအတော် အဘောကျသွားတယ်။ ရှုခင်းတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာလေ
ဒီလိုလား ဖရဲ ရဲ့……….
ကျုပ်ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်က အိမ်ထောင်စုစာရင်း မန္တလေးမြောက်ပြင်မှာရှိတယ်။
အလှူမတိုင်ခင် နှစ်ပတ်လောက် မန္တလေးကို ကြိုလာပြီး ဖရဲအိမ်မှာတည်းမယ်…။
ဦးပါလေရာက မန်းလေးက မြောက်ပြင်သားလား
ရက်စက်လိုက်တာဖရဲမရယ် နာကရန်ကုန်သူဆိုတော့ ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ဝေးပြီပေ့ါ …. တွေ့မယ် တွေ့မယ် ဖရဲမ ပန်းတနော်သွားတဲ့လမ်းကျမှ ညည်းတို့မန်းသူမန်းသားတွေကို နာတို့ရန်ကုန်သူ/သားတွေက နှိပ်ကွပ် ပြမယ် …. ဟိုအပုမ မိတိုက်လည်း ဟိုမရောက်ဒီမရောက်မ တွေ့မယ်တွေ့မယ် …. နာတို့ကပန်းတနော် သွားရင် ရန်ကုန်သား/သူ စစ်စစ်တွေဆို ပထမဆု ကွန်ဒိုသိန်း ၃၀၀ဝတန် (၁၀) ခန်း ၊ ဒုတိယဆု ရွှေငါးကား (၁၀) စီး၊ တတိတယဆုကိုတော့ ဂျပန်ခရီးစဉ် (၃၀) ဦး …. ရန်ကုန်သား/သူစစ်ကြောင်း မှတ်ပုံတင်ပြရန် ….. မွေးစာရင်းပြရန် ….
တို့ နှစ်ယောက်လုံးစီမှာ စာရင်းသွင်းလိုက်မယ်နော်
ဟဲ့ ဖြဲဒီး သများတို့လည်း လိုက်ချင်တယ်။ ချန်မထားရဘူးနော်.
စာရင်းတို့ထားလိုက် ကျန်ခဲ့ရင်စိတ်ဆိုးပလိုက်မှာ ဒါဗြဲ
ပရိုမိုးရှင်းပွဲတွေ လုပ်နေပါလား.. အလှူလိုက်မဲ့ သူတွေကို ပရိုမိုးရှင်းထက် အလှူခံ များများ ရအောင် လုပ်ကြပါအုန်း။
သများလည်း ဒီက သများအပေါင်းအသင်းတွေကို
အတိအကျ သိရရင် ပြောပါ့မယ်ချင့်…
ဒီက အသံကြားလား ဒါပဲ..
အဲဒီ က အသံ နားစွင့်နေတယ် ဒါပဲ..
အမလေး စိတ်ချ အမဆူး
စိတ်မပူနဲ့ မန်းလေးမှာ ဖရဲရှိတယ်
ခြင်္သေ့ထုပ်မှတဲ့နော်။ အကြွေထုပ်ဆို မရဘူးရယ်။
ခိုင်ခိုင် ဆီမှာဘဲ စာရင်းပေးလိုက်ပြီနော်…
ဖရဲအိမ်တည်းမိမှ အရင်ရည်းစားဟောင်းက ……………..
သများက မန်းလေးနားကမြို့က။ သိပ်မဝေးလို့ သများရောအကြုံးဝင်လာဟင် မိဖရဲ။ အမျိုးတွေတော့ မန်းလေးမှာပွလို့။
အမျိုးတွေကချောမှချော။ အင်း ဒိုင်လျှိုလေးနဲ့ပထမဆုပေးမယ်ဆိုရင် သဘောတူ၏။ ဟီဟိ
ရန်ကုန်ကလည်းမဟုတ် မန္တလေးကလည်းမဟုတ် ။
ကိုအောင် အဲလိုတော့မပြောပါနဲ့ ဖရဲမနဲ့မီးနဲ့က လက်ဆောင်အပြန်အလှန်ပေးဖို့ အစီအစဉ်တွေ ချိတယ်ချင့် …. မီးကမိတိုက်မဆီက မာစကဒ်မရလိုက်ဘူး အဲဒါဖရဲမကပေးမယ်တဲ့ …..
ကျနော် တရုတ်ကနေ မီနီစကတ် တကိုင်းကြိုး ၂လက်မဘောင်းဘီ ဝယ်လာမယ်
ပန်းတနော်သွားရင် ဝတ်ပြနော် ဟီး ဟီး
ဒီအစီစဉ်က ကျွန်တော်တို့ မန်းလေးက မန်ဘာတွေ ကိုယ်တိုင်အိတ်စိုက်ပြီး လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် မန်းလေးသူားဖြစ်မှ ရမှာပါ
တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် ကျွန်တော်တို့ အခြောက်တွေက သိတယ်မလား ဟင်း ဟင်း
ဟင့်အင့်ငိုချင်တယ် မန်းသူမန်းသားတွေဘဲတဲ့လေ တို့ကရန်ကုန်သူလေ ဟွန်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးမဖရဲမတရားဘူး
စနိုး လေး အတွက် ဖရဲ မလုပ်ပေးရင် ကိုပေ့ ကို သာပြော ။ကိုပေ စီစဉ်ပေးပါ့မယ်ကွယ် ။
အဲဒီတော့ ဦးမာဃနေရာ တစ်ယောက်ထည့်ပေးမယ်။
ဦးမာဃ ကတော့ ဟိုအကောင် သပနဝန်ကြီး ငအေးမြင့်ကြောင့် လိုက်လို့မရဘူး
သမက်လေးက သပန ကလား ? ဒယ်ဒီလည်း သပနမှာလုပ်ဖူးတယ် အူးသောင်းရှိဒုံးဂလေ
Thit Sar Lin ရာခက်နိုးနိုး တစ်ခြားမြို့ကလူတွေလဲ ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် မဲဖောက်လိုက်ပေါ့ကွာ။
((တစ်ခြားမြို့ကလူတွေလဲ ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် မဲဖောက်လိုက်ပေါ့ကွာ))ဦးပေါက်တို့ကလည်း..
အလှူပါဆိုမှ ခွဲခြားခွဲခြားဆက်ဆံချင်သေးလို့လား…မန္တလေးကလူမှမှ….မှဆိုပြီး ခွဲခြားခွဲခြားမလုပ်ချင်ပါနဲ့ဗျာ
ရွာသူရွာသားတွေအားလုံး တညီတညွတ်တည်း သွားချင်လို့ဟာကို ခွဲခြားခွဲခြားမလုပ်ချင်ပါနဲ့ဗျာ
မန်းလေးက လူက ဒီလိုပရိုမိုးရှင်းလုပ်ရော။
ဟာမန်းလေးက ဒီလိုလုပ်ရင်ငါတို့မြို့ကလဲ အဲလို ပရိုမိုရင်းလုပ်မယ်ဆိုလုပ်ရော
တစ်ခါတစ်လေလဲ ဖြန့်ထွက်အတွေးလေးနဲ့တွေးကြည့်တယ် မယ်သစ္စာရဲ့။
အဆုံးသတ်မှာ စုစည်းဘို့အတွက်အသေးလေးတွေကို ပါလာအောင်စုစည်းယူတာ။.
ဒီပိုစ်ကလဲ ဟာသအနေနဲ့ရေးတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိတယ်။
ဒါကို ဦးပေါက်ကလဲ ပေါက်တယ် အားလုံးလဲပေါက်တယ် မပေါက်တာ မင်းတစ်ယောက်ထဲရယ်။
စကားလက်ဆောင်ပါးရရင် ကောင်းသောစိတ်ဖြင့်ရူ့မြင်ပါလို့ဘဲပြောချင်ပါတယ်. မယ်သစ္စာရေ
မိုင်ဆွန်ခ မင်္ဂလာတရာ;အော........... says:
တီတီဖြဲ မြစ်လောင်းသားကောပါလို့ရလား လက်ရှိတော့ရှမ်းပြည်မှာနေတယ်
မြစ်လောင်းက မန်းအစွန်မှာဆိုတော့ သူလည်းအကျုံးဝင်သလားဟင်
တီတီဖြဲ စဉ်းစားပေးပါမယ် မင်္ဂလာပါလေးရယ်
သများ က တော့ဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူး။ ရေတံခွန်ကို တကယ်သွားချင်တယ်။ ရေလေးတွေကကြည်ကြည်လေးတွေနဲ့ ဆော့လိုက်ချင်တယ်။ ဒိုင်ဗင်ထိုးပြစ်လိုက်ချင်စိတ်ပေါက်တယ် ဒါဗြဲ။ မိဖရဲ လေးပေါက်ကြီး ကြော်ငြာဝင်ပြီး သများ မန်းလေး လာရင်လိုက်ပို့ ရမယ်နော်။ ကတိကတိ။ အပြွတ်ပြောတဲ့ စကပ်လဲ ဝတ်မယ်. အဲယောင်လို့ စားမယ် စားမယ်။
သွားမယ်ဆို အဝတ်အပိုတော့ ဆောင်ခဲ့နော်။.